Robert Yamate : “Mila fiarovana ny mpampiasa vola rehetra” (NewsMada) | AEMW
Robert Yamate : “Mila fiarovana ny mpampiasa vola rehetra” (NewsMada)
Anisan’ny nantsoin’ny Search for Common Ground ny masoivoho amerikanina eto an-toerana, Robert Yamate, ny 17 aogositra teo, nandritra ny fivoriana niaraha-nidinika mikasika ny « Fanjakana tsara tantana sy ny zon’ny olombelona ao anatin’ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany ». Nohamafisin’i Robert Yamate ny tokony hisian’ny demokrasia tsara fototra amina firenena iray, miantoka ny zon’ny olom-pirenena ao aminy, fiarovana azy ireo sy ny mpiara-miombon’antoka ara-toekarena avy any ivelany miasa eto an-toerana.
« Ny firenena toa an’i Madagasikara, izay mikatsaka fandrosoana ka miantoka tanteraka ny fiarovana ireo mpampiasa vola ao aminy, sakana iray amin’ny tsy fandriampahalemana, tsy mampirisika ny tanora ao aminy hiditra amin’ny fampiasan-kery sy fanaovana asa fampihorohoroana », hoy i Robert Yamate. Eto Madagasikara anefa, hita taratra ihany izay tsy fandriampahalemana izay amin’ny asan-dahalo.
“Ny mpampiasa vola rehetra maneran-tany, tsy maintsy mila fiarovana amin’izay ataony amin’ny fitrandrahana ireo voajanahary ataony eto Madagasikara”, hoy ny masoivoho amerikanina. Noho izany, tompon’andraikitra ny rehetra, ny orinasa sy ny mpiaro azy, ny hery avy amin’ny fanjakana hiaro ny fandriampahalemana sy ny zon’olombelona.
« Zava-dehibe ho an’ny mpampiasa vola ny mahalala ny tontolon’ny toerana misy ny orinasany, ny loza mety hitranga, fa eo ihany koa ny fiaraha-midinika amin’ny mpitantana ao amin’ilay an-toerana, ONG sy fikambanana samihafa. Ny fahafantarana sy fanajana ny tontolo misy azy, antoka iray lehibe ho an’ny mpampiasa vola manana tetikasa lavitra ezaka”, hoy ny ambasadaoro Robert Yamate.
← “Foire d’Ylang” – Mpandraharaha vehivavy : fifanakalozana tamin’ireo Maorisianina sy Aostralianina (NewsMada)
Oniversite Mahajanga : dimy taona ny sekolim-pandalinana lalàna (NewsMada) →